G-Talk to GSM Mobile | ရွှေမင်းသား
Home » နည်းပညာ » G-Talk to GSM Mobile
G-Talk to GSM Mobile
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Thursday, April 30, 2009
နိုင်ငံခြားရောက်နေသော ရွှေမြန်မာများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော G-Talk မှ GSM သို့ Message လှမ်းပို့နိုင်သော စနစ်တစ်ခုကို
ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေသောကြောင့် ဝေမျှလိုက်ရပါသည်။
ကိုယ့် G-talk မှာ gtalk@etmsms.com ကို Invite(Add) လုပ်လိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာပြီး စိမ်းနေတဲ့အထိစောင့်ပါ.
G-talk Message Box ထဲတွင် (sms 09--------- Hello! Long time no see) စသဖြင့် ကိုယ်ရေးချင်တာရေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း Your Message has been sent. စသည့် စာသားပေါ်လာလျှင် သင်ပို့ပြီးသွားပါပြီ။
သတိပြုရန်မှာ sms နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကြားတွင် space bar ခံပါ။ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် စာသားကြားကိုလည်း space bar ခံပါ။Country Code
ခံစရာမလိုပဲ ဖုန်းနံပါတ်သာ ရိုက်ထည့်၍ Message ပို့နိုင်ပါပြီ။